Maraykanka oo soo dhaweeyey qorshaha Suuriya - BBC News Somali
Maraykanka oo soo dhaweeyey qorshaha Suuriya
19 Disembar 2015
Dowladda Maraykanka ayaa soo dhawaysay qorshaha cusub ee golaha amaanka uu ka gaaray dagaalka dalka Suuriya
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa xalay si aqlabiyad ah u meel mariyay qaraar lagu taageerayo hannaanka nabadeed ee Suuriya.
John Kerry ayaa sheegay in qaraarkan cusub uu dadka Suuriya siinayo kala doorasho ah nabad ama dagaal
Waa markii ugu horreysay muddo shan sana ah oo dalkaasi Suuriya uu ka socday dagaal ba’an oo golahan ay u suuragashay in uu isku raaco hannaan siyaasadeed oo la isugu dayayo in lagu dhameeyo dagaalkaasi.
Qorshahan uu taageeray Golaha Ammaanka ayaa waxa uu ku baaqayaa xabad joojin ka dhaqangasha guud ah dalka oo dhan iyo wadaxaajood siyaasadeed, kuwaasi oo looga gol leeyahay in lagu bilaabo wadahadal bisha Janaayo ee sanadka soo socda.
Waa qorshe wanaagsan oo jaangoyn u ah rajada ah in ugu yaraantii ay taageerayaasha dowladda iyo mucaaradka ay wada aqbali karaan.
Assad oo sii haynaya xilka
Image caption Madaxweynaha Suuriya Bashaar Al-Assad
Qaraarkan waxba kama oranayo mustaqbalka Madaxweyne Assad, balse waxa uu qeexayaa in dadka reer Suuriya ay tahay in ay go’aan ka gaaraan mustaqbalka waddankooda isla markaana ay dajiyaan jadwal doorasho xor iyo xaq ah oo ay Qaramada Midoobay kormeere ka tahay oo lagu qabto 18 bilood gudahood.
Haatan wadammada Reer Galbeedka iyo Carabta ayaa aqbalay in Madaxweynaha Suuriya uu qeyb ka sii ahaado kala guurka siyaasadeed, waxayse ku adkaysanayaan in ugu dambeyntii uu meesha ka baxo.
Balse dhinacyada soo qoray tubta nabadda ee Suuriya ayaa rumaysan in soo afjaridda colaadda sokeeye ee Suuriya ay tahay sida kaliya ee loola dagaalami karo kooxda la baxday Dowladda Islaamiga ah, kooxdaasi oo aad ugu fidday gudaha Suuriya iyadoo ka faa’iidaysatay qalalaasaha dalkaasi ka jira.
Dhinacyada ayaa ku rajaweyn in taageerada Qaramada Midoobay ay wax wayn ka tari doonto geedi socodka nabadda Suuriya islamarkaana ay tahay wax ay ku diirsadaan dadka Suuriya.